Taageerayaasha dhaqdhaqaaqa Koonfureed oo dibadbaxyo balaadhan ka sameeyay Cadan - Horn Future
Taageerayaasha dhaqdhaqaaqa Koonfureed oo dibadbaxyo balaadhan ka sameeyay Cadan
Cadan –Waxa isku gu soo ururay magaaladda Cadan taageerayaasha dhaqdhaqaaqa Koonfureed ee Yemen oo ka kala yimiday dhowr gobol oo kuyaala koonfurta kuwaas oo kasoo horjeeda xilka qaadista lagu sameeyay 2 kamid ah masuuliyiinta Yemen.
Dadkan dibadbaxa ka dhigay magaaladda Cadan ayaa waxa ay codsadeen in lagu dhawaaqo hoggaan siyaasadeed oo Koonfureed kaas oo uu madax ka noqon doono gudmooyihii magaaladda Cadan Caydrauus al-Zubaydi oo isaga xilka uu ka qaaday madaxweyne Cabdi-Rabo Mansuur Haadi.
Dibad-baxayaashan ayaa waxa ay cusbooneysiiyeen codsigooga ku wajahan gobolka iyo caalamka ee ah inay ka jawaabaan doonistooda,waxana ay ku dhawaaqeen inay taageersan yihiin al-Zubaydi iyo Haani bin Briik oo ahaa wasiiro-dowle kuwaas oo xilka laga qaaday in ka badan 2 todobaad ka hor.
Hadal qoraal ah oo loogu magac daray “baaqii taariikhiga ah ee Caden,”ayaa waxa uu ku sheegay dhaqdhaqaaqa Koonfureed qadyadiisu inay tahay mid cadaalad ah oo haysata sharcinimo siyaasadeed iyo mid qaanuun,waxana uu sheegay in uu diidan yahay xilka ka qaadista lagu sameeyay labadan masuul.
Waxa go’aanka madaxweyne Cabdi-Rabo Mansuur Haadi xilka kaga qaaday diiday Al- Zubaidi iyo Bin Briik oo labaduba xidhiidh dhow lala leh dhaqdhaqaaqa Koonfurta iyo Imaaraadka Carabta ee Midoobey oo iyaku ka qayb galay dibadbaxan.
Warbaahinta ayaa sheegtay in sababaha xilka looga qaaday wasiiru-dowlaha Haani bin Briik ay salka ku hayso in jagadan dowliga ah uu u adeegsaday danaha Imaaraadka Carabta taasoo si weyn uga soo horjeeda danaha madaxbannaanida ee Yemen, iyada oo gaadhay ilaa heer diidmada go’aannada madaxweynaha Yemen madaxweyne Cabdi-Rabo Mansuur Haadi.
Madaxweynaha Yemen Cabdi-Rabo Mansuur Haadi ayaa waxa uu soo saaray 27 April amar xilka lagaga qaaday al-Zubaidi kaas oo isaga loo magacaabay safiir.
Qoyska aala Nahyaan ee maamula Imaaraadka Carabta ayaa waxa ay faro-galin qaawan oo foolxun ka wadaan dalalka Carabta iyaga oo adeegsanaya hantida had-dhaafka ah ee sida dhibta yar ay ku heleen taas oo ay u adeegsadaaan inay kaga hortaggaan madaxbanaani ay gaadhaan shucuubta isbadil doonka ah ee Carabta.
Waxa xusid mudan in qoysaskan maamula imaaradaha Khaliijka ee u hormood u yahay Sucuudigu ay ku bixiyeen in ka badan (40$ biliion) milyaar oo dollar shirqoolkii lagu afgambiyay madaxwaynihii u horeeyay ee si dimuqraadi shicibka Masar usoo doorto Maxamad Mursi taariikhda dalkaasi,iyada oo afgambigii dilaaga Sisi ku kacay sababtiisa ay ku dhinteen kumanaan qof oo rayid ah oonan waxba galabsan.
Qoysaskan ka kooban kumanaan qof ee xooga ku haysta imaaradahan ayaa waxa ay u arkaan isbadilo siyaasadeed oo ka dhaca dalalka Carabta inay halis aad u wayn ku hayaan maamuladooda u dhisan qaab adoonsi oo dunida inteeda kale kuwa lamid ah aanan ka jirin marka laga reebo dalalka ay xooga ku haystaan kaligood-taliyayaasha fara-kutiriska ah ee ku hadhay dunida gaar ahaan Afrika iyo Carabta.
« Massive Google Docs scam roils users in US, elsewhere	» Indian forces launch crackdown on Kashmiri villages